Slewing Ring / Slewing Bearing - reducers, reducers worm, boaty worm, boaty planeta, reducers hafainganam-pandeha, variatera, kojakoja helika, giram-baravarankely, boaty fambolena, kodiarana traktera, girety kamiao, boaty kankana
Sidina mihetsiketsika / mitondra tsimoka
Home / Fitaovana / Rantsana mitsivalana / Fikolokoloana
Ny bearing bearings dia afaka mandray axial, radial ary fotoana fohy, mihetsika miaraka na miaraka na amin'ny lafiny rehetra. Tsy miorina amin'ny trano na amin'ny zana-kazo izy ireo, fa mivantana amin'ny sehatra hipetrahana. Ny peratra anatiny sy ivelany dia misy lavaka mihombo. Ireo peratra roa dia mety misy girama tsy mitambatra. Izy ireo koa dia antsoina hoe peratra famonoana sy fitondra tabilao. Ny bearing perlewing dia afaka manao oscillating (slaying) ary koa hetsika miodina. Izy ireo dia azo ampiasaina tsy misy paosy na miaraka amin'ny paosy anatiny na ivelany.
Ny bearing bearings dia ny bearings lehibe izay afaka mitondra axial, load radial avo kokoa ary amin'ny fotoana miverina. Ny famonoana banting dia matetika aseho amin'ny lavaka mihombo, fitaovana anatiny na fitaovana ivelany, lavaka fanosotra ans tombo-kase fitaovana. Miampita gilasy famonoana varingarina miaraka amin'ny fahafaha-mavitrika lehibe kokoa.
Ny bearing bearings dia be mpampiasa amin'ny crane, ny milina fananganana, ny seranan-tsambo sy ny mekanisma shi ary ny latabatra lehibe mihodina ho an'ny radara sy balafomanga
1.fito-hevitra fifandraisana baolina famonoana miteraka (tsy misy fitaovana, ivelany fitaovana, ao anatiny fitaovana);
2. baolina roa-laharana famonoana miteraka;
3.ceft cylindrical roller famonoana banting (tsy misy fitaovana, ivelany fitaovana sy anatiny fitaovana);
4.Telo-laharana varingarina varingarina varingarina
Antsipiriany misimisy kokoa: Slewing Ring download